Howlgalo agagaarka wadooyinka looga sifeynayo dadka darbi jiifka ah oo ka dhacay Mombasa – The Voice of Northeastern Kenya
Howlgalo agagaarka wadooyinka looga sifeynayo dadka darbi jiifka ah oo ka dhacay Mombasa
Star FM December 22, 2016
Laamaha amaanka ee maamul goboleedka Mombasa ayaa weli wado howlgalo dadka darbijiifka ah looga sifeynayo agagaarka wadooyinka halka gacanta lagu dhigayo burcada dhaca u geysta shacabka.
Ugu yaraan 50 ka mid ah dadka hooy ka dhigta hareeraha wadooyinka ayaa shalay gacanta lagu dhigay maadama shacabka ay muujiyeen cabasho ku aadan in ay taleefoonada iyo buursadaha lacagta la gashto kala baxsadaan kadibna ay duumaleystaan.
Waxaa la soo helay talefoona badan oo kuwa gacanta ah oo la aaminsanyahay in la xaday halka eedeysanyaasha la tuhmayana xabsiga loo taxaabay.
Naheed Muusa oo ah taliyaha kooxda howlgaladan fulineysa ayaa sheegay in ay sii wadayaan in la badbaadiyo shacabka iyo sido kale dadka booqasho ku tagayo countigaasi.
Wuxuu intaas ku daray in ay tallabadan ku dhaqaqeen kadib markii ay soo ifbaxeen warar sheegay in caruurta darbi jiifka ah ay la shaqeystaan tuugada si loo dhaco hantida dadka rayidka ah oo maraya agagaarka wadooyinka.
Mamul goboleedka Mombasa aya waxaa hada ku sugan dad kakala yimid wadamada dunida iyo sido kale kuwo ka tagay degaanada kale ee dalkani Kenya.
Iyada oo todobaadkii hore isku duwaha amaanka ee gobolka xeebta Nelson Marwa uu sheegay in amaanka Mombasa la isku halayn karo ayaa waxaa hada si weyn loo adkeeyay xaalada amaanka ee maamul goboledka Mombasa.
← Shaqaalaha countiyada oo ay suurta gal tahay in uu ka soo dib dhaco musharka bishan Disembar
Qaramada Midoobay oo u codeeynayso in israiil ay isaga baxdo qaar ka mid ah degaanada Falastiin →